Akpanye nwa ya n'okpuru uwe ya - ụdị okpu ọ ga-eyi na kpochapụla, nke a na-ehicha ahụ, nke a na-ekpuchi, mkpuchi akpụkpọ anụ?
Ọkpụkpọ n'okpuru uwe - dị ka ụdị isi iyi iji bulie uwe ahụ?
Ọkpụkpọ ahụ n'okpuru uwe ahụ ga-agbadọta ụdị ejiji na ejiji ejiji. Na oge ugbu a, ndị na-ahụ maka ndị na-ewu ewu na-enye ndị ọhụrụ nhọrọ maka imepụta nke ọma. Ụdị ntụgharị ígwè nchara, na-ekpuchi anụ beanies ma nwee obi ụtọ.
Kedu ihe na-eme uwe?
Uwe ejiji na akwa, ma ọ bụ kama ịhọrọ ha, dịka ndị stylists si kwuo, ga-agbaso ọtụtụ iwu n'ozuzu:
Ihe na-esiwanye ike ma na-esiwanye ike nke ejiji na-ekpuchi elu, ọ ga-adị mma.
Obere obere nke nwanyi, obere ya nwere ike ịbụ.
Ọ bụrụ na ihe eji eji ejiji na-eme ka ejiji, ejiji ma ọ bụ ihe ọkpụkpụ, ọ ga-adị ntakịrị.
Isi oche n'okpuru uwe dịka agba nke uwe elu:
Nwa . Obere n'elu n'elu ụzọ dị mfe na-ejikọta ya na mkpuchi aji ya na uwe mgbochi nke a kụnyere n'okpuru ya ma ọ bụ obere akpa ego.
Blue . Agba nke ihe ejiji dị mma - agba ntụ, ọcha, nwa, agba aja aja ma ọ bụ anụnụ anụnụ.
Grey . Akpụkpọ ụkwụ baseball, nke na-acha odo odo ma ọ bụ agba aja aja.
Red . Site n'ụdị njide dị otú ahụ, ndị na-acha ọcha, na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ admirably.
Agba aja aja . Ndị ọkachamara ejiji ejikọta agba a na uwe elu na-acha odo odo ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ.
Ngwongwo a kpochapụrụ n'okpuru uwe
Akpado n'okpuru uwe ndị inyom si na Italiangirl Blugirl na-ekepụtara maka ụmụ agbọghọ ndị na-enweghị ncheta, ịhụnanya ma mara otú e si enweta ndụ. Na oge ugbu a na nchịkọta ya, e nwere ezigbo silhouettes nke na-ebipụta mkpụrụ osisi floral na nke ọma. Onye mmepụta ihe Rossella Jardini nyere ndị na-eto eto nke ejiji na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị ntụrụndụ na ọdịdị ala. Dị mfe, dị mfe ma dị mfe iji yie - ụdị ụdịdị kwa ụbọchị.
Beanie n'okpuru uwe elu ahụ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ịhọrọ nsụgharị elongated na-enweghị ihe ndozi. Na na aki ma na-egbutu ya na ọ ga-aka mma ile anya beanies ahụ site na ya. Ị nwere ike imecha ihe oyiyi ahụ ma ọ bụ akwa ụda na ụda. Ụdị ọhụrụ nke ejiji bụ okpu ya na ákwà mgbochi. Ọ dị nnọọ iche ma mara mma.
The Canadian brand Dsquared2 ama ama ụwa mara mma na-eji mara mma imewe nke headdress. Onye a ma ama nke ụmụnne Dan na Dean Caten nyere otu okpokoro isi okpokoro okpukpu abụọ nke nwere ihu na okpueze dị elu, nke a na-eji okooko osisi na-enwu gbaa. A na-eji uwe na-ekpuchi ya na nchịkọta nke onye okike Marc Jacobs. Ọ dị elu na ọkwa dị elu a na-enwetụbeghị ụdị ya.
Ulo ejiji French nke Herm nke oge a akwusiwo ihe di nma n'ile ya anya na ihe nlere anya nke ndi isi - a na-eme ka a ghara ikpu ya. Otu okpu n'okpuru uwe nke nwere oke nkwekorita bu ihe ohuru nke oge. Ihe dị iche iche nke ụdị ndị a bụ ntụgharị, nke bụ na ọ bara uru maka ụdị uwe na ọdịdị ihu.
Na-akwa na okpu na pompon
Ị nwere ike ịhụ na ejiji na-egosi okpu na-adọrọ mmasị na uwe, site na onye mmepụta Tommy Hilfiger, onye kpochapụla ejiji ndị ntorobịa America. Ha bụ otu okpukpu dị iche iche na-ejikọta ọnụ na pompons. N'ozuzu, ụdị ndị a na-ejikọta ọnụ na uwe na-adị kwa ụbọchị na egwuregwu, ha nọkwa na nchịkọta nke ọtụtụ ndị na-ahụ maka ụwa. Omume nke oge a bụ ihe a na-eji emepụta ihe na-egbuke egbuke. Ọ mara mara mma na mara mma.
Ndị na-achọ mgbaghara siri ike ka mma ịhọrọ "uwe ndị isi" na ụda ụda nke elu. Ọ na-ele anya na ọ dị mma na-ejikọta ya na bubo n'obe buru ibu na ebe nchekwa. A na-atụnye okpu n'okpuru uwe ahụ na nke a na-atụ aro ya n'ụdị dị iche iche:
nwere nnukwu ụkwụ.
Kedu ka esi ewepụta okpu uwe?
A na-ahọrọ okpu ejiji dị ka ihu nke ihu, na-echebara iwu ndị a:
Oval . Ụdị ọdịdị nke ihu, nke na-ele anya dị ukwuu, ụta, ịcha ọkpọ na okpu agha.
Gburugburu . Enwere ike ịme ihe dị ebube na floppy ma ọ bụ volumetric.
Na triangle . Họrọ ụdị dị mma, nke na-ekpuchi ihu ihu ya, na-enweghị ihe ndozi na ihe ọkụkụ.
Ogbe . Ushanka ma ọ bụ onye ntorobịa na-atụ bọmbụ - nhọrọ kacha mma.
Ọkpụkpọ n'okpuru uwe n'ihi na agba nke ntutu dị mfe ịhọrọ, dị nnọọ mkpa ịmara ụfọdụ njirimara:
Na keisi ocha . Ọ ka mma ịhọrọ akpụkpọ anụ, na-acha anụnụ anụnụ, na isi awọ na nke agba chaa chaa.
Nwa nwanyi isi ncha . Ngwunye mara mma na-acha anụnụ anụnụ, aja aja, nwa na kọfị.
Na na na . Nhọrọ mmeri ga-abụ uhie, acha anụnụ anụnụ na burgundy shades.
Redhead . Ọ ka mma inye ihe edozi edo edo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, agba aja aja na agba aja aja.
Isi oche na-ekpuchi uwe
Iji ghọta ụdị okpu ọ ga-eji na-eyi ihe mkpuchi, ọ dị mkpa iji chọpụta ihe ọkpụkpụ ahụ na-ese onyinyo ahụ. Na ugbua na ihe a na-eme nhọrọ gị. Dịka ọmụmaatụ, Italian Fashion House Prada na-atụ aro na ha na-anakọta ihe ndị dị iche iche nke Breton. Karl Lagerfeld na-akọ akụkọ ihe nkiri na Chanel gosiri ọtụtụ ihe dị iche iche nke isi: ụyọkọ na ntị, na-eji nkume na mma na-atụ egwu. Ọbụna ndị na-ahụ maka ụwa na-akwado akwa uwe dị iche iche na-eme ka ọ dịkwuo ibu ka ha kwadoro berets, fur na brija, ejigide na slouch.
Isi na kpochapụla uwe
Ubube na uwe kpochapu, site n'aka ndi French nke Martin Grant, bu okpu mara nma nke oji na oghere na-abanye na ihe nchapu nke na-eme ka uwe elu na-achacha acha. Ụlọ ejiji Dior na-eme ka nchịkọta ya dị iche iche na akpụkpọ anụ. Ihe a na-akpọ Italian Beatrice B na-akpọ Italian bụ nke a ma ama.
Okpokoro maka uwe a kpochara, dị ka ndị stylists, nwere ike inwe ụdị dịgasị iche, a na-ejikwa ya dịgasị iche iche, kama ịchọta ihe ka mma maka 2 shades darker karịa uwe elu:
nwere obi ụtọ;
ejiri ákwà kpuchie ya;
okpu agha nke aji;
Onu na uwe na akwa aji
Site na akpụkpọ anụ na-acha uhie uhie, okpu n'okpuru uwe a na-eji akwa aji na egosiputa na egosiputa nke Miu Miu nke Italian. Onye nduzi okike nke Chitose Abe a na-etinye aka na Sacai na ọtụtụ textures. Ọ na-atụ aro ya na okpu aji. Onye na-emepụta ihe nke onye American designer Marc Jacobs gosiri na ọ na-emepụta ihe dị iche iche dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, mgbịrịgba dị n'ụdị mgbịrịgba na ụdị nke iri afọ asaa na ụdị nke anụmanụ.
Ọbụna na ihe ngosi ejiji, ị nwere ike ịhụ redigot na olu akwa. Ejiri ihe dị otú a:
akpụkpọ anụ nke sequins;
a mbadamba nkume;
ejiji ndị e ji ajị anụ mee;
akpụkpọ anụ na aji ọnụego;
Ebube na uwe elu
Akpokọta oyi oyi na okpu sitere na onye mmebe Ịtali Fausto Puglisi na-ahụ maka ịhụnanya maka kitsch, nkwekọrịta nkwekọrịta na nkwonkwo obi nke akwa na okooko osisi. N'elu ụdị isi ejiji, a na-enye okpu eze brimmed n'ozuzu ya. English rịọrọ ika Stella McCartney na-enye aka iji kwado ihe oyiyi ahụ na ihe nkedo mbụ na nsụgharị nsụgharị. Ihe dị iche iche nke ngwa ngwa isi na uwe ndị na-ekpochapu ihe dị iche iche sitere n'aka ndị na-akụ azụ ụwa:
ekweisi ekwe ntị;
beanies na pompon;
Kedu ihe mkpuchi ga-eyi uwe mwụda uwe?
A na-ahụ uwe elu na-acha isi awọ nke nwere uwe elu nke Fedor na nchịkọta kachasị ọhụrụ nke ndị inyom Dior. The oyiyi anya nkecha na irreproachable! A na-ahụ uwe na-eto eto nke nwere eriri dịgasị iche n'ọtụtụ ndị na-akụkwa ụzụ. Ha na-akwado ya:
Kedu okpu ọ ga-eyi uwe mkpuchi?
Onye na-emepụta ihe na Spanish bụ Cristobal Balenciaga dị n'azụ n'afọ 1957, gosipụtara ụwa ejiji na-eme ihe ngosi dị mma na ejiji na-acha gburugburu ya - aịkọ. Ihe a bụ ọkụ ọkụ ma nwee ike ịbịakwute na oyiyi ahụ, na nke a, ngwa bara uru ịhọrọ monochrome agba nkịtị. Ịhọrọ isi mkpuchi maka mkpuchi mkpuchi ka mma inye onyinye:
ụdọ na-ekpuchi ọnụ.
Ebube na mkpuchi akpụkpọ anụ
N'ọtụtụ ọnọdụ, akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na - agba agba - agba, ọcha na aja aja. N'okwu ndị a, ọ ka mma ịhọrọ ihe ndị yiri nke ndo. A na-ahụ ihe ndị dị otú ahụ na nchịkọta nke ndị na-ahụ maka ihe ndị a ma ama. Dịka ọmụmaatụ, onye na-emepụta ndị Italy bụ Miuccia Prada, na ihe ngosi ikpeazụ ahụ, nwere obi ụtọ na okirikiri a na-eji ọkụ na-acha ọkụ a na-ejikọta ya. Giorgio Armani, nke mere ka ụwa mara mma dị mkpirikpi nke akpụkpọ anụ, nke a na-ejikọta ya na okpu nke anụ ezi-ya na obere ogige.
Otu mkpuchi mkpuchi na uwe mkpuchi akpụkpọ anụ, dịka ndị na-edepụta akpụkpọ ụkwụ, ga-abụ otu ihe dị mma maka ịmepụta ihe na-eto eto na-eto eto, ma ị nwekwara ike iji uwe mkpuchi:
onye na-ekpuchi ntị;
akpụkpọ ụkwụ baseball akpụkpọ anụ.
Nkume ọla edo maka aka ụmụ nwanyị - otu esi ahọrọ na nke aka aka?
Ụfụ ụcha - ụzọ mara mma nke ekekọta n'olu na n'isi
Ogologo ogologo oge ụmụ nwanyị - dịka a na-akpọ ha, otu esi ahọrọ na ihe ha ga-eyi?
Uwe nwanyi akpụkpọ anụ
Ụmụaka na lapis lazuli
Ntuchi sitere na palladium
Akpụkpọ anụ ngwa ngwa
Osisi na cubic Zirkonia - 66 foto nke mara mma ọla ntị na cubic Zirkonia maka ọ bụla uto
Nchoputa nke afọ ime na mmalite oge
Ureaplasma n'ime ụmụ nwanyị - nke bụ ụkpụrụ
Ọla ọla ọla na enamel
Ngwọta ndị mmadu na-eme maka ihe mgbaru ọsọ
Strawberry n'oge ime
Barley na anya - ihe dị ize ndụ, gịnị mere o ji eme na otu esi emeso gordeolum?
Eke ntutu - ihe ị ga-eme?
Ọgwụgwọ nke cervicitis na-adịghị ala ala
Salad na ncha
Ugbo cucumbers na windowsill ke ini etuep
Nri ihu ọchị maka oyi
Akwụkwọ nri puree ofe
Socks maka nkịta
Rob Kardashian jụrụ nwanyị ahụ dị ime
Akpụkpọ ụkwụ ụmụ nwanyị 2015
Nri maka nri maka afọ ọhụrụ